मोबाइल खोजीको बढ्दो वर्चस्व | Martech Zone
मोबाइल वेबसाइट हुनु वास्तवमै एक विकल्प होईन र आजका दिन वेब विकासकर्ताहरूले अपसेल गर्नु हुँदैन। हामी हाम्रो साइटहरू र ग्राहक साइटहरूको सबै मोबाइल संस्करणहरूमा महिनौं देखि काम गर्दैछौं र यसको भुक्तानी भइरहेको छ। औसतमा हामी हेर्दैछौं कि हाम्रो ग्राहकहरूको १०% भन्दा बढि आगन्तुकहरू मोबाइल उपकरणबाट आइपुगेका छन्। खुल्ला Martech Zone, जुन मोबाइल उपकरणहरूको लागि अनुकूलित छ, हामी देख्छौं हाम्रो यातायात को २०% भन्दा बढि एक मोबाइल वा ट्याब्लेट उपकरणबाट आउँदै!
मोबाइल वेब छिटो बढिरहेको अनलाइन क्षेत्र हो। Billion अरब भन्दा बढी जडित स्मार्टफोनहरूको घर, तथ्या .्कले देखाउँदछ कि मोबाइल प्रयोगले २०१4सम्ममा डेस्कटप ट्राफिकलाई हराउनेछ। यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाई जुन किसिमको व्यवसाय चलाउनुहुन्छ, तपाईको दर्शक मोबाइल वेबमा छन्, र तपाइँ उनीहरूमा पुग्नु पर्छ।
त्यहाँ मोबाइल भ्रमणमा एक विशेष व्यवहार छ जुन सामान्य वेब विजिटर भन्दा बिलकुलै फरक छ। तपाईंको साइटमा अवतरण गर्ने मोबाइल खोजीकर्ताहरूले सामान्यतया तपाईंको व्यवसाय भ्रमण गरिरहेका छन् वा उनीहरूले खरीद गर्न खोजेका छन्। AlchemyViral सँगै यो अविश्वसनीय जानकारी राख्नु भएको छ मोबाइल अप्टिमाइजेसनमा इन्फोग्राफिक.
टैग: अल्केमिवाइरलइंफोग्राफ़कमोबाइल इन्फोग्राफिकमोबाइल अनुकूलनमोबाइल अनुकूलनमोबाइल खोजीमोबाइल खोज तथ्या .्कमोबाइल एसईओएसईओ
के तपाईं देख्नुहुन्छ गुगलले के लिन्छ?